လူစာရင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လူစာရင်း
Posted by kai on Jul 2, 2011 in Myanma News, Opinions & Discussion, Press Announcements | 30 comments
The Regime’s Cronies List
ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က အမေရိကား အောက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မီတီ၏ ကြားနာမှု အစီအစဉ်တွင် ၀ါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် USCB အဖွဲ့ ဦးဆောင်သူ ကိုအောင်ဒင်က သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ မြန်မာပြည်အပေါ် ငွေကြေးစီးပွားဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမျိူးကို တိုးချဲ့ပြုလုပ်ရန် အကြံပြု တင်ပြခဲ့သည်။ သြစတြေးလျက မြန်မာစစ်အာဏာရှင်များ၊ မိသားစုများ၊ စစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ အပေါင်းအပါ စီးပွားဖက်များ၊ အကာအကွယ်ပေးသူများ၊ မိသားစုများ၏ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၄၀၀ ကို စာရင်းပြုစု သတ်မှတ်ပြီး ငွေကြေးစီးပွားပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်ထားကြောင်း ထောက်ပြသည်။ အမေရိကား၏ ပစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့မှုမှာ သြစတြေးလျစာရင်းထက်စာလျင် များစွာ လျော့နည်းကြောင်း ထိုနမူနာကို ကြည့်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းထားသည်။
အောက်တွင် လူစာရင်းကို ဖေါ်ပြထားသည်။
မှတ်ချက်။ ။ သတင်းအဖြစ် ရရှိထားသည့်စာရင်းကို သိသာစေရန်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို မိမိတို့၏လူ့ အခွင့်အရေးအလိုတော်အရ ပြန်လှန်ဆွေးနွေးချေပနိုင်သည်။
အရေးယူတာမယူတာတော့ မသိဘူးလောလောဆယ်သူုတို့ကတော့ လူချမ်းသာတွေပါဘဲ။
နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့တော့ ကျနော်တို့လိုအခြေခံလူတန်းစားကသာ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတာပါဘဲ။
ကျန်တာကတော့ လက်လှမ်းမမှီလို့ ကျနော်လဲမသိဘူးဗျာ။.
ဘယ်ဟာတွေကို ဈေးကြီးပေးဝယ်နေရတာလည်း ရှင်းရှင်းပြောရင် ပိုကောင်းမယ်ဗျ။ စကားကပ်ပြောရရင် ပိတ်ဆို့ထားမှ ပုဇွန်ထုပ်ကြီးဈေးထဲမှာ ပြန်မြင်ရမယ်လေ။ ဦးပေါက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရင် ပို့စ်တပိုဒ်လောက် တင်ကြည့်ပါလား။ အပြန်အလှန် အမြင်ချင်းဖလှယ်လို့ရတာပေါ့။ အတည်ပြောတာနော်၊ တူမချောနဲ့ သဘောမတူတော့ဘူးတော့ မလုပ်ပါနဲ့။
ဈေးသွားရင် အဲလိုပြန်လာရပေါင်း များဘီ…..
ပုစွန်ကျား၊ ဘော့ချိတ်၊ ပုစွန်ထုတ်ပေါက်စတွေနဲ့ပဲ စိတ်ဖြေသိမ့်ရပေါင်းလည်း များခဲ့ပါဘီ……
ပိတ်ဆို့ နေတာထက်..ဒုံးကျည်နဲ့ ပါထုထည့်လိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်..
ဘသူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့ ကောင်စားမျိုးတွေမိုလို့အားကြီးစောက်မြင်ကတ်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သန်း(၆၀)သောပြည်သူများအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သဘာဝသယံဇာတတွေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ၊ စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ဒီလူတစ်စုနည်းနည်းလေးကဘဲ လက်ဝါးကြီးအုပ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ နောက်လဲ ဆက်ပြီး လက်ဝါးကြီးအုပ်ပိတ်ဆို့နေမှာပါဘဲ။ ဒီလူတစ်စုရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်ပိတ်ဆို့မှုတွေက မလွတ်မြောက်မချင်း တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဆက်လက်ပြီး ဆင်းရဲမွဲတေနေဦးမှာပါဘဲ။ အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေဦးမှာပါ။ ပြသနာတွေလည်း ဆက်ရှိနေဦးမှာပါဘဲ။ လက်ရှိအခြေအနေရတော့ သန်း(၆၀)က ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက မှားတာကို မှားနေတယ်လို့ထောက်ပြပြီး ပိတ်ဆို့အရေးယူနေတာ လက်ရှိအခြေအနေက ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်လာအောင်၊ ဒီမတရားတဲ့စနစ်တွေပပျောက်အောင် တဖက်တလမ်းက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာလို့ မြင်ပါတယ်။ မှားတာတွေကို ပြင်လိုက်ရင် ကျန်တာတွေ ပြေလည်သွားမှာပါ။
ဒီလူတွေက ချမ်းသာတယ် အားကြီးတယ် ၊ တိုင်းပြည်ကို ဗိုလ်ကျ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတယ်။
ပိတ်ဆို့မှု့လုပ်လို့ သူတို့ထိခိုက်နစ်နာသွားသည်ဖြစ်စေ၊ ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ သူတို့ ပိုချမ်းသာသွားသည်ဖြစ်စေ ၊ ဗိုလ်ကျ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားနိုင်တဲ့ နေရာမှာပဲဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို သတ်ပစ်နိုင်တယ်ထားဦး သူတို့နေရာမှာ “ဒုတိယသူတို့” တွေ နေရာဝင်ယူမှာပဲဖြစ်တယ်။
ပိတ်ပိတ် ဖွင့်ဖွင့် သူတို့ ဘာမှသိပ်မဖြစ်ဘူး။
ပြည်သူကျတော့ ….တိုင်းပြည်ကျတော့….“ ဖြစ်တယ်။ ”
တိုင်းပြည်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု့ဟာ တိုင်းပြည်ကို ပိုဆင်းရဲစေတယ်။ အခွင့်အလမ်းနည်းစေတယ်၊ အခြားတိုင်းပြည်များနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း လျှော့နည်းစေတယ်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကျဆင်းစေတယ်။
ကုန်သွယ်မှု့အခွင့်အလမ်းနဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ကြီးစွာ ထိခိုက်စေတယ်။
အခု ကုန်ထုတ်ကရိယာနဲ့ နည်းပညာတွေမှာ တရုတ်လုပ် အညံ့စားတွေကလွဲရင် ဘာမှရွေးစရာမရှိတာ သက်သေပဲ။
ပြီးတော့ နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျဆဲဖြစ်နေတာလဲ ပိတ်ဆို့မှု့တွေရဲ့ အကြောင်းမကင်းဘူးလို့ပဲ ယူဆပါတယ်။
နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း ဒီလိုလူတွေကျ အလွန်အမင်း ချမ်းသာသွားပြီး ပြည်သူတွေကျ နလံကိုမထူတာကလဲ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု့ ခုတ်ရာတခြားရှရာတလွဲ ဖြစ်နေတာကိုဖေါ်ပြပါတယ်။
ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ စီးပွားရေးနာလန်ထူလာမယ်လို့ ဘာအာမခံချက်နဲ့ ပြောနိုင်ပါသလဲ။ တိုင်ပြည်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှုရဲ့ အရင်းခံ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊ အခွင့်အလမ်းကောင်းမှန်သမျှ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးမှု၊ တလွဲစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေကို မပြင်ဘဲနဲ့ ရမယ်လို့ ဘာကြောင့်ထင်ရပါသလဲ။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးကိုပဲ ကြည့်ပါ၊ ရွေးဂေါက်ပွဲပြီးရင် အခြေအနေတွေကောင်းလာမယ်ပြောတယ်၊ အခုဆိုရင် အစိုးရသစ်တက်တာ ရက်၁၀၀ ပြည့်တော့မယ်၊ ဘာမှတိုးတက်မှုမရှိ၊ နယ်စပ်တွေမှာ တိုက်ပွဲတွေတောင် ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ရွေးဂေါက်ပွဲပြီးရင် နိုင်ငံရေးပြောင်းလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကျီးယောင်ဆောင်ဒေါင်းတွေ၊ စားဖားတွေ၊ နောက်ဆွဲတွေ ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ၊ စစ်အစိုးရမှာသာ ရွေးဂေါက်ပွဲနိုင်အစိုးရဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထွက်သွားတယ်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုဖွင့်လို့ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲ မွဲမြဲမွဲနေတော့လည်း ဒီလိုပဲ ကိုယ်ပြောခဲ့တာမဟုတ်သလို မျက်နှာလွှဲခဲပစ် လုပ်နေကြအုံးမှာပဲ။
ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖွင့်ချင်ရင် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း စေ့စပ်လိုက်လျောမှု တွေလုပ်ရမယ်။ ဒါကိုကြတော့ ပြောရင်နာမှာစိုးလို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေပြီး တဖက်ကို နင်းပြောတာတော့ ကိုယ်သိက္ခာကိုယ် ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။
လေးစားစွာနဲ့ ပြန်ဆွေးနွေးပါသဗျာ –
ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ စီးပွားရေးနာလန်ထူလာမယ်လို့ ဘာအာမခံချက်မှမရှိပါဘူး။ စီးပွားရေးနာလန်ထူလာဘို့က အခြားအဓိကအကြောင်းများစွာရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေ ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်း ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှသာ ရေရှည်မှာ စီးပွားရေးနာလန်ထူမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကွန်မင့်မှာ ဆွေးနွေးတာကတော့ စီးပွားရေးနာလန်ထူဘို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှု့တွေမှ သက်သာရာရအောင်ပါ။
တိုင်ပြည်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှုရဲ့ အရင်းခံ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊ အခွင့်အလမ်းကောင်းမှန်သမျှ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးမှု၊ တလွဲစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေကို မပြင်ဘဲနဲ့ ရမယ်လို့(စီးပွားရေးကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့) ကျွန်တော်လဲမထင်ပါဘူး။ စစ်အစိုးရဘက်ကလူတွေအပါအ၀င် အခြားထင်တဲ့လူလဲ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ အဲဒါတွေကို ပြင်ရမှာပါ၊ ဖြေရှင်းရမှာပါ၊ တိုက်ဖျက်ရမှာပါ။
အဲဒီတော့ အဲဒါတွေပြင်လို့မပြီးခင်မှာ အခြေအနေ အလွန်ဆိုးရွားနေတဲ့ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်ငယ်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေမှာ နဲနဲဖြစ်ဖြစ် သက်သာရာမရသင့်ဘူးလား။
အဲဒီပြင်စရာတွေက လူတယောက် လူတစု က ထိထိရောက်ရောက် ပြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ အများဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ လူ(ခေါင်းဆောင်)တွေက အများကျေနပ်သဘောတူတဲ့ စည်းမျဉ်း(အခြေခံဥပဒေ)အရ အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှသာ /သို့မဟုတ် လွယ်လွယ်ပြောရရင် ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ရမှသာ မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် ပြုပြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ရောက်ဘို့ တော်တော်ကိုလိုပါသေးတယ်။ လမ်းစကို မမြင်ရသေးသလောက်ပါဘဲ။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေက အဲဒီလောက်စောင့်နိုင်ပါ့မလား။ အခုကိုပဲ ဒေသတွင်းမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်လောက်အောင် ဆိုးနေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ မကြာခင် AFTA လိုဟာမျိုးတွေ လာတော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့က မထုတ်လုပ်နိုင်ရင် ရှိတာရောင်းစားရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရေ မြေ တော တောင် တွေ သူများဝယ်ကုန်လိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုလဲ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ပိတ်ဆို့မှု့တွေကို လက်ရှိအာဏာပိုင်တွေက ဖွင့်ချင်တယ်လို့တောင် ကျွန်တော်တော့ မထင်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်ဝေခံ အပေါင်းအပါတွေအဖို့ ပိတ်ထားတာက ပိုပြီး လက်ဝါးကြီးအုပ် ဗိုလ်ကျခွင့်ရစေတယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အစိုးရကတော့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစေ့စပ်လိုက်လျောတာတွေ လုပ်မယ်မထင်ပါဘူး။ လုပ်ရင်လဲ ပိတ်ဆို့မှု့တွေ ဖယ်စေချင်လို့ထက် သူတို့ရဲ့ ကစားကွက်အဖြစ်ပဲလုပ်မှာပါ။ ပြည်သူကို အဲဒီလောက်ညှာတာတတ်ရင် ဒီအခြေအနေမရောက်ပါဘူး။
စိတ်မရှိနဲ့နော် ။ ကျွန်တော့်ကွန်မင့်မှာပြောတာမို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောတာလို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကိုကြောင်ကြီး အထင်မှားနေပါပြီ။
ဦးကိုကိုအောင်ခင်ဗျား..ကျနော့်စကားလုံးတွေ ရင့်သီးသွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် အဲဒီအသုံးအနှုန်းကို ရွေးဂေါက်ပွဲသည်သာ တခုတည်းသော ထွက်လမ်းဆိုပြီး သူခိုးအားပေးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ ယောင်ပေပေ အတိုက်အခံအမတ်များ၊ တတိယအင်အားစုလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမည်ပေးထားတဲ့သာကူးများ၊ စပ်တပ်လက်ပါးစေ ဒလျှိုဒလန်များကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ ဦးကိုကိုအောင်က အဲဒီအထဲမှာပါရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။
စာပါအကြောင်းအရာဖက် ပြန်လှည့်ရရင် စီပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ မရှိရင် ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်မျက်နှာသာပေးပေး အခွင့်အရေးရှိရှိ လုပ်တတ်ကိုင်တတ် နည်းလမ်းမှန်မှ ရပါမယ်။ လက်ရှိမှာ မြန်မာပြည်သည် အာစီယံ တရုတ် ကုလား ဂျပန် စတာတွေနဲ့ ကုန်သွယ်ခွင့် ရနေပါတယ်။ အာစီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာဆို ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျတဲ့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတခုအနေနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး အထူးအခွင့်အရေးများ အပေးခံထားရတယ်။ ဒီလောက်နှစ်တွေကြာလာတာတောင် မြန်မာ့စီးပွားရေး အခြေအနေကတော့ သိတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံတကာမပြောနဲ့ ဒေသတွင်းမှာတောင် သူများနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မရှိသေးပါဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မတိုးတက်တာဆိုရင် သူတို့လက်လှမ်းမမှီတဲ့ ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှုမှာ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကောင်းစွာရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နိုင်ကြောင်း၊ ပြည်သူအများ အကျိုးစီးပွားခံစားရကြောင်း ပြနိုင်ရမယ်။ ဒါမှသာ ဟိုဟာကြောင့်ဒါဖြစ်တာလို့ လက်ညှိုးထိုးလို့ရပါမယ်။ အဲဒီလိုရော တကယ်လက်တွေ့ လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလား၊ ရှိသမှသိပ်ရှိပါ။ လက်ရှိ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကို လုပ်ချင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျွန်းသစ်၊ ကျောက်မျက် တွင်းထွက်သယံဇာတတွေကရတဲ့ ဘီလီယံနဲ့ချည်တဲ့ ဒေါ်လာတွေနဲ့ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှုပြုရင် မရနိုင်ဘူးလား။ ရသမျှကို အိပ်ထဲထည့်၊ စစ်အသုံးစရိတ်ကို တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်တဝက်ကျော်သုံးပြီး အခြေခံ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး စတာတွေကြတော့ မဖြစ်စလောက်နဲ့ထားပြီး နင်တို့ကြောင့် လူတွေဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တာပါလို့ပြောတာကို သံယောင်လိုက်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ကိုယ်မှာရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ပြနိုင်ရင် တဖက်က ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းသွားမှာပါ။ တကယ်လူထုကို အကျိုးမပြုဆိုရင် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း လက်လျှော့သွားပါလိမ့်မယ်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်တွေမှာ ဒေါ်စုတိုင်းပြည်အနှံ့ ခရီးထွက်တော့မှာမို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရေချိန် မြင့်လာပါတော့မယ်။ ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ခံရင် ရန်သူအားပေး သံယောင်လိုက်စကား မပြောမိဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ နို့မို့လို့ကတော့ စစ်တပ်သက်ဆိုးရှည်ဖို့ တဖက်လှည့်နဲ့ အားပေးရာရောက်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိအာဏာရများနဲ့လက်ဝေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် လူထုအပေါ်ပိုပြီးလက်ဝါးကြီးအုပ်ဗိုလ်ကျလာမယ်ဆိုတဲ့ တွက်ကိန်းက အဆံမပါတဲ့ နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ထွက်လမ်း ဆင်ခြေပါ။ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေကြတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ စီးပွားရေးပညရှင်တွေ က အဖြေမျိုးစုံပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တိတိကျကျအဖြေမပေးပါဘူး။ တမင် အဖြေမပေးတာလို့ဆိုပါရစေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေပါလာလို့ပါ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဟာ very specific ပါ။ သက်ဆိုင်တဲ့သူကိုတိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားပါတယ်။ targeted ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဟာ သူတို့လုပ်ငန်းတွေအမြဲရှင်သန်နေ ဘို့ cash flow ရှိဘို့သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဟာ အဲ့ဒီ cash flow ရှိတဲ့နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက် ပစ်မှတ်ထားပါတယ်။ လွတ်လမ်းမရှိလို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရွေးစရာလမ်မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ သူတို့မှာရှိတဲ့ သုံးမကုန်အောင်ရှိတဲ့ ဒေါ်လာတွေ ထွက်လမ်းမရှိပိတ်နေပါတယ်။ dollar cash value မှာ cash value မရှိတော့ပါဘူး။ အမေရိကားမှာနေတဲ့ မောင်ဖြူဆိုတဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ငွေသား one dollar ဟာ one dollar တန်ဘိုးအပြည့်ရှိပေမဲ့၊ အဲ့ဒီလိုဒေါ်လာမျိုး one dollar ကိုကိုင်ထားတဲ့ ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေ လက်ထဲမှာ one dollar တန်ဘိုးမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါဟာ ပိတ်ဆို့မှုရဲ့ ရလာဒ်တွေထဲကတခုပါ။ ဒေါ်လာဈေးတဗုန်းဗုန်းကျနေတာဟာ ငြင်းမရတဲ့ သက်သေတခုပါ။
မြေနီကုန်းက တော်ဝင်ကုန်တိုက်ကြီးမှာ မြန်မာလူထု ရာနှုန်းဘယ်လောက်သုံးနိုင်ကြလဲ? ဘယ်လောက်မှန်မှန်သုံးနိုင်ကြသလဲ။ လူထု(၉၀)ရာနှုန်းကျော်ကနေ့စဉ်မှန်မျန်သုံးရတဲ့ ကုန်တိုက်တခု၊ အားကိုးရတဲ့ကုန်တိုက်တခုဆိုရင်တော့ ပိတ်ဆို့မှုဟာမှားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီကုန်တိုက်ကိုပိုင်တဲ့ ဒဂုဏ်ဝင်းအောင် ဟာပစ်မှတ်ထဲပါသူတဦးမို့ သူ့ကိုပိတ်ဆို့ထားပေမဲ့ လူထုက ဘာမှထိခိုက်စရာမရှိပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တော်ဝင်ကုန်တိုက်ဟာ မြန်မာလူထုတရပ်လုံအတွက် သေရေးရှင်ရေးမရှိမဖြစ်မဟုတ်လို့ပါ။ ထိုနည်းတူ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ စက်မှု၊ အထည် ထုတ်လုပ်မှုတွေ….ဒါတွေအားလုံအလားတူပါဘဲ။ အများလူထုကသုံးနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီကရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်အားလုံးဟာ အဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်များ (အရပ်ဝတ်လဲများ) ရဲ့ အိပ်ကပ်ထဲ တိုက်ရိုက် (တိုက်ရိုက်ဆိုတာယုံကြပါဗျာ။) ၀င်သွားပါတယ်။ အဲ..၀န်ထမ်းအလုပ်နေရာပေါ်ထွန်းလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေ ကရော…။ ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ ကသူတို့စီးပွားရေးသက်ဇိုးေ၇ှဘို့ labor ကိုပေါပေါလောလော သုံနိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့နေ့စဉ်သုံဖြုံးနေကြတာတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အပရိကပါ။
ပြောခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာစီးပွားရေးပညာရှင်တွေက ဒီပိတ်ဆို့မှုဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာကြားဝင် ခေါင်းခံလေ့မရှိပါဘူး။ မ၀င်မဖြစ်လို့ဝင်ရရင်လဲ (အစိုးရဘက်နီးရင်) ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖယ်ပေးပါလို့မျက်စေ့မှိတ်ပြီးအော်ကြရပါတယ်။ သေခြာတာတခုကတော့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုတဲ့ ခေတ်သစ်လက်နက်ဟာ သမန်ကာရှန်ကာ သုံတဲ့ လက်နက်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာကိုလေ့လာဆန်းစစ်နေကြတဲ့ think tank တွေရှိသလို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒေါ်စု က အမေရိကန်ကွန်ိဂရက်ကို တိုက်တွန်းထားတဲ့ စကားစုကလေးရှိပါတယ်။ “အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆက်လုပ်ပါ”…..တဲ့။
မှန်ပ့ါ Ko Ko Aung ရှင့်…
ပြည်သူအများဆင်းရဲတာ၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကျတာ၊ ပြည်ပပိတ်ဆို့မှုက အဓိကမကျပါဘူး။
ကိုယ်အသုံးမကျတာ သူများကြောင့်လို့ ဆင်ခြေပေးတာပါဘဲ။
ဘိလပ်မြေ၊ စားအုန်းဆီလို အခြေခံပစည်းတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ ကုမဏီတွေကြောင့် ဈေးတက်တာ ပြည်ပနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ကမာပေါ်မှာ ဖုန်းတွေဈေးပေါပေါသုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ ဈေးကြီးပေး ၀ယ်သုံးရတာ၊ ကားတွေကို မတန်တဆဈေးနဲ့ ၀ယ်သုံးရလို့ သာမန်ပြည်သူတွေမှာ ကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်တာ ပြည်ပနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။
သစ်တောတွေ အပြောင်ရှင်း၊ တလကြမ်းခုတ်၊ သစ်လုံးလိုက် နိုင်ငံခြားကို အောက်ဈေးနဲ့ရောင်း၊ သစ်စက်ရုံတွေ ကုန်ကြမ်းပြတ်လပ်လို့ လုပ်ငန်းတွေရပ်ကုန်တာ ပြည်ပပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။
သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေ၊ ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို ရောင်းစားပြီး နေပြည်တော်လို မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဘီလီယံနဲ့ချီသုံးတဲ့အတွက် အများပြည်သူအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးတွေမှာ ထိထိရောက်ရောက်မသုံးနိုင်တာ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လို့ လက်ညိုးထိုးလို့ မရပါဘူး။
ပိတ်ဆို့မှုဖွင့်မှ မတရားရထားတဲ့ငွေတွေကို တကမာလုံး စိတ်ကြိုက်ဖြုံးနိုင်မဲ့လူတွေကတော့ ပိတ်ဆို့မှုကို အလိုမရှိပါဘူး။
ဘယ်ဟာအဓိကလည်း၊ ဘယ်ဟာ ကိုယ့်အပြစ်ကို ဖုံးကွယ်တာလည်း၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရင် အားလုံးပြေလည်သွားမလည်း အများပြည်သူများ သိထားသင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းစစ်တပ်ဖြင့် ပိတ်ဆို့ ဖမ်းဆီးသင့်ပါကြောင်း……………………
ပိတ်ပိတ် ကြိုက်သလောက်ပိတ်…”မင်းတို့ ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့ မင်းတို့ဘက်မှာ O ရှိတယ်” “O”ဆီကိုသာ သစ်တွေ၊ကျောက်စိမ်းတွေမှန်မှန်ပို့ပေးဖို့ မမေ့နဲ့။
လူဆိုတာက တော်တဲ့လူကနည်းပြီး ညံ့တဲ့လူကများတော. အရေးယူခံရတာမဆန်းပါဘူး…မြန်မာပြည်လူဦးရေသန်း ၆၀ ကျော်မှာ လူ ၄၀၀ ပဲဆန်ကာတင်တယ်…
အင်းစိန်မှာ 400 မကပါဘူး
တော်တဲ့လူတွေ အများကြီးပဲ လေ အရေးယူခံထားရတာ
ဟုတ်တယ် ဟုတ်… ?
hak hak hak :XD
ပိတ်ဆို့​ဒဏ်ခတ်တဲ့​ကိစ္စက အ​ပေး​အယူအဖြစ်နဲ့​ အများ​ကြီး​လျှော့​ပေါ့​ပေး​နိုင်တယ်
မနက်ဖြန် မြန်မာနိုင်ငံကို လာ​ရောက်မယ့်​ ဩစ​တြေး​လျနိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ ကယ်ဗင်ရတ် (Kevin Rudd) ရဲ့​ ခရီး​စဉ်နဲ့​ ပတ်သက်လို့​ ဆစ်ဒနီ အ​ခြေစိုက် ဘား​မား​ကမ်ပိန်း​ ဩစ​တြေး​လျ (Burma Campaign Australia) ရဲ့​ ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ ​ဒေါက်တာမြင့်​ချိုကို ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​ထား​ပါတယ်။
ဩစ​တြေး​လျက အရင်တုန်း​ကလည်း​ အမျိုး​သား​ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​ဆိုပြီး​တော့​မှ ​ပြောတဲ့​အတိုင်း​ပဲ ဒီ ခရီး​စဉ်မှာလည်း​ပဲ အမျိုး​သား​ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​အတွက် ​ပြောမယ်ဆိုပြီး​တော့​မှ ​ကြေညာချက်မှာ​တော့​ ကျ​နော်တို့​ ​တွေ့​တာ​ပေါ့​ဆရာ။ Burma Campaign Australia အ​နေနဲ့​ ကျ​တော့​ ထိ​ရောက်မှုက ဘယ်​လောက် ရှိနိုင်တယ်လို့​ ဆရာတို့​ ယူဆလဲ။
“နံပါတ် ၁ အချက်က သွား​တဲ့​ ဩစ​တြေး​လျဝန်ကြီး​ ကိုယ်၌ကိုက မြန်မာပြည် ဒီမိုက​ရေစီအ​ပြောင်း​အလဲ ဖြစ်​ပေါ်​ရေး​မှာ တကယ့်​ကို အင်တိုက်အား​တိုက် ​ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့​ ဆန္ဒရှိတယ်။ အရင်တုန်း​ကလည်း​ အတိုက်အခံ ဘဝမှာ​ကော၊​ ဝန်ကြီး​ချုပ်ဘဝမှာ​ကော၊​ လက်ရှိ နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ ဘဝမှာ​ကော တက်တက်ကြွကြွ လုပ်​ဆောင်​ပေး​နေတဲ့​အတွက်​ကြောင့်​ သူ့​ရဲ့​ အင်တိုက်အား​တိုက် လုပ်​ဆောင်မှုက​တော့​ တစုံတရာ အကျိုး​သက်​ရောက်မှု ရှိမယ်လို့​ ကျ​နော် ယူဆတယ်။ ​နောက်တချက်ကလည်း​ သွား​တဲ့​အခါမှာ ဖိအား​ပဲ ​ပေး​မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့​ ကူညီနိုင်မယ့်​ ကိစ္စ​တွေကိုလည်း​ အများ​ကြီး​ ချပြပြီး​တော့​ ကူညီလက်စနဲ့​ တဖက်က အ​ပြောင်း​အလဲ လုပ်​ပေး​မယ့််​ ကိစ္စ​တွေကို အ​ပေး​အယူ လုပ်ပြီး​တော့​ ​ဆွေး​နွေး​လိမ့်​မယ်လို့​ ကျ​နော် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
“ဥပမာ ဩစ​တြေး​လျက​နေ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့​ ဒီ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​တွေနဲ့​ သူတို့​ရဲ့​ မိသား​စု​တွေနဲ့​ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်​ဖော်ကိုင်ဖက် အ​ပေါင်း​အပါ ၄၆၃ ဦး​ကို ဘဏ္ဍာ​ရေး​အရ ပစ်မှတ်ထား​ပြီး​တော့​ ပိတ်ဆို့​ထား​တဲ့​ ကိစ္စ​တွေ၊​ ဩစ​တြေး​လျကို လာလို့​မရ​အောင် ဗီဇာပိတ်ပင်တဲ့​ ကိစ္စ​တွေ၊​ မြန်မာနိုင်ငံကို တင်သွင်း​နေတဲ့​ ကာကွယ်​ရေး​ပစ္စည်း​တွေ မ​ရောင်း​ချရ​အောင် ပိတ်ပင်ထား​တဲ့​ ကိစ္စ​တွေ ဒီ ဆန်ရှင်ကိစ္စ​တွေဟာ လက်ရှိ နအဖ စစ်အုပ်စု​ကော၊​ လက်ရှိ ကြံ့​ဖွံ့​အစိုး​ရ​ကော မလိုချင်ဆုံး​အရာပဲ။ အဲဒီအ​ပေါ်မှာ ဩစ​တြေး​လျအစိုး​ရကို ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့​ဒဏ်ခတ်မှု ရုပ်သ်ိမ်း​ဖို့​ ​ပြောမှာပဲ။ အဲဒီ​တော့​ ဩစ​တြေး​လျအစိုး​ရ အ​နေနဲ့​ကလည်း​ ဒါ​တွေ ချမှတ်ထား​တာက ဗမာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​တွေ လွတ်​မြောက်ဖို့​အတွက်၊​ ​နောက်ပြီး​တော့​ အမျိုး​သား​ ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​အတွက် ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ရေး​တွေ ဖြစ်​ပေါ်လာ​အောင်၊​ တိ်ုင်း​ရင်း​သား​လူမျိုး​စု​တွေကို လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ချိုး​ဖောက်​နေတဲ့​ ကိစ္စ​တွေ ရပ်သွား​အောင် ဆိုပြီး​တော့​ သူတို့​ ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့​မှုကို ​တောင်း​ဆိုထား​တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီ​တော့​ ဒါ​တွေကို သူတို့​က ပြန်ပြီး​တော့​ ​ပြောမယ်ဆိုရင်​တော့​ ဒီပိတ်ဆို့​ဒဏ်ခတ်တဲ့​ ကိစ္စ​တွေနဲ့​ပဲ အ​ပေး​အယူအဖြစ်နဲ့​ အများ​ကြီး​လျှော့​ပေါ့​ စဉ်း​စား​ပေး​နိုင်တယ်လို့​ ကျ​နော်ယူဆပါတယ်။”
နောက်တချက်က နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ တ​ယောက် ကိုယ်တိုင်က မသွား​တာ ကြာပြီ​ပေါ့​လေ။ အခုသွား​တယ်ဆိုတဲ့​ဟာက ဒါက ဘယ်​လောက်ထူး​ခြား​တဲ့​ ခရီး​စဉ်လို့​ ​ပြောလို့​ရလဲ။ ဆိုလိုတာက နိုင်ငံခြား​ရေး​ပေါ်လစီက ဗမာပြည်နဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​တော့​မှ အကြီး​အကျယ် ​ပြောင်း​လဲသွား​တဲ့​ဟာမျိုး​ ဖြစ်သွား​ပြီလား​ ဒီနှစ်​တွေထဲမှာ။
“ဒီ ​လေဘာအစိုး​ရ တက်လာပြီး​ ​နောက်ပိ်ုင်း​မှာ​တော့​ အရင်အစိုး​ရထက် စာရင်​တော့​ အ​ပြောင်း​အလဲ​တွေ ရှိပါတယ်။ သို့​သော်လည်း​ ဩစ​တြေး​လျ နိုင်ငံ​ရေး​မှာ ဘယ်ပါတီပဲ အစိုး​ရဖြစ်ဖြစ် သူတို့​ရဲ့​ နိုင်ငံခြား​ရေး​မှုဝါဒက မြန်မာပြည်အ​ပေါ်မှာ ထား​ရှိတာ အတူတူပါပဲ။ တစ်အချက်က​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​နဲ့​ ဒီမိုက​ရေစီ ထွန်း​ကား​လာ​အောင်၊​ ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ရေး​နဲ့​ အမျိုး​သား​ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​ ဖြစ်​ပေါ်လာ​အောင်ဆိုတဲ့​ ရည်ရွယ်ချက်က ဘယ်အစိုး​ရတက်တက် တူတူပါပဲ။ ​နောက်တချက်က ဩစ​တြေး​လျမှာရှိတဲ့​ မြန်မာနိုင်ငံသား​ နှစ်​သောင်း​လောက်ရဲ့​ တိုက်တွန်း​နှိုး​ဆော်ချက်​တွေကလည်း​ ဩစ​တြေး​လျအစိုး​ရက​နေ ဂရုစိုက်ရမယ့်​ အချက်​တွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီ နှစ်ချက်အ​ပေါ်မှာ အ​ခြေခံပြီး​တော့​ ဩစ​တြေး​လျအစိုး​ရတိုင်း​ အစိုး​ရတိုင်း​ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​တော့​ နိုင်ငံခြား​ရေး​မူဝါဒ ချမှတ်တဲ့​အခါမှာ အမြဲတမ်း​လိုလိုပဲ ဆင်တူယိုး​မှား​ ရှိပတယ်။ တခုပဲ ရှိတာက စီး​ပွား​ရေး​နဲ့​ ပတ်သက်လာရင်​တော့​ အရင်အစိုး​ရက​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ဖို့​အတွက် ပိုဆန္ဒများ​တယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ လက်ရှိအစိုး​ရက​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ပါလို့​လည်း​ မတိုက်တွန်း​ဘူး​၊​ မလုပ်ပါနဲ့​လို့​လည်း​ မပိတ်ပင်ဘူး​။ တဖက်က​နေ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ရင်​တော့​ ဥပ​ဒေ​တွေက စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​တွေ အာမခံချက် မရှိဘူး​၊​ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​တွေက အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဒါ​ကြောင့်​မို့​လို့​ သွား​ချင်တဲ့​ ကုမ္ပဏီ၊​ လုပ်ချင်တဲ့​ ကုမ္ပဏီ​တွေက ကိုယ့်​ဟာကိုယ် ဆုံး​ဖြတ်ပါဆိုပြီး​ အန္တရာယ်​တွေကို​တော့​ ကြိုတင်​ပြောပြတဲ့​အဆင့်​ကို​တော့​ သူတို့​ သတိ​ပေး​ပါတယ်။ ဆို​တော့​ အခု သွား​တဲ့​ ကိစ္စက​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံ​ရေး​ကို တကယ်ပဲ နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်း​ကြီး​ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွား​ရောက် စကား​ပြောပြီး​ တိုက်တွန်း​နှိုး​ဆော်မယ်ဆို​တော့​ ဒါက ထူး​ခြား​လေး​နက်တဲ့​ ခရီး​စဉ်လို့​ ကျ​နော်တို့​ မြင်ပါတယ်။ ​နောက်တချက်က ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ကိုလည်း​ ​တွေ့​ပြီး​တော့​ စကား​ပြောမယ့်​ ကိစ္စ​တွေ ရှိလာတဲ့​အခါကျ​တော့​ ဘာ​ပြော​ပြော က​နေ့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်​နေတဲ့​ လွှတ်​တော်နိုင်ငံ​ရေး​ ပြင်ပမှာရှိတဲ့​ အထင်ကရ နိုင်ငံ​ရေး​အင်အား​စု​တွေ အကုန်လုံး​ကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့​ ပုံစံမျိုး​နဲ့​ တ​လေး​တစား​ ဆက်ဆံတဲ့​ ကိစ္စမို့​လို့​ ဒါကလည်း​ အ​ရေး​ကြီး​တဲ့​ ခရီး​စဉ်လို့​ ကျ​နော်တို့​ သုံး​သပ်ပါတယ်။”
Burma Campaign Australia က​ကော ဒီခရီး​စဉ်မတိုင်ခင်မှာ သူ့​ကို သတင်း​စကား​ ပါး​လိုက်တာမျိုး​၊​ တိုက်တွန်း​လိုက်တာမျိုး​ လုပ်ခွင့်​ရခဲ့​ပါသလား​။
“ဟုတ်ကဲ့​ ကျ​နော်တို့​ ​မေလ ၁၂ ရက်​နေ့​တုန်း​က နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ ကင်ဗင်ရတ်နဲ့​ ကျ​နော်တို့​ ဖယ်ဒရယ်ပါလီမန်ထဲမှာ တိုက်ရိုက် မျက်နှာချင်း​ဆိုင် ​တွေ့​ဆုံ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ပါတယ်။ အဲဒီတုန်း​က​တော့​ ကျ​နော်တို့​ နယ်စပ်ဖြတ်​ကျော်ပြီး​တော့​ မြန်မာပြည်က တိုင်း​ရင်း​သား​လူမျိုး​စု​တွေကို အကူအညီ​ပေး​ဖို့​ ဆိုတဲ့​ ကိစ္စ​တွေကို အဓိက ထား​ပြီး​တော့​ ကျ​နော်တို့​ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း​ပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုက​ရေစီရရှိ​ရေး​၊​ ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ပြီး​တော့​ အမျိုး​သား​ပြန်လည်သင့်​မြတ်​ရေး​၊​ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​တွေကို ​လေး​စား​လိုက်နာ​ရေး​၊​ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ လွတ်​မြောက်​ရေး​တွေ အကုန်လုံး​ကို ကျ​နော်တို့​ ​သေချာ​ဆွေး​နွေး​ပြီး​တော့​ ဒါ​တွေကို ရ​အောင် ဆက်ပြီး​တော့​ ကြိုး​စား​ပေး​ပါလို့​ ကျ​နော်တို့​ သူ့​ကို တိုက်တွန်း​ခဲ့​ပါတယ်။”
ဖွင့်ဖွင့် ပိတ်ပိတ်၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့လူတွေ လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားသမျှတော့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး….
အိမ်းးး လီနင်တို့ သခင်သန်းထွန်းတို့ သခင်စိုးတို့ ခင်ဗျား…. ဒါတွေကို ဒီအတိုင်ကြည့်နေ တော့မှာလား … စိတ်ထဲကပြောတာပါ…။ အပြင်မှာ ပြောရဲပါဝူး..။
ဖွင့်တာတို့ ပိတ်တာတို့ ဆိုတာကတော့
အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သဘောတူ၏ ကန့်ကွက်၏ ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကတော့
သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူ အရေးပါတယ် ( ဒါက ကျုပ်အမြင် )
အမှန်ဆို သာမန်လူတစ်ယောက်ကို ခင်ဗျားတို့
သူလိုကိုယ်လို တစ်ယောက်ကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကိုလက္ခံလားလို့မေးကြည့်
တစ်ခြား အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ စီးပွားရေး ဖက်လဲတစ်ကင်းပြုရေးပေါ့
ဖွင့်ပေးမှ အခြေခံလူတန်စားတွေ ဝင်ငွေရမယ်ဘာညာပေါ့
ယနေ့လက်ရှိမှာ သယံစာတတွေကို ရောင်းနေဝယ်နေကြတာဘဲ
ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ မအေလိုးတွေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ခိုးထားတာတွေကို
မဖွင့်ပေးတော့ မအေလိုးတွေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ခိုးထားတာတွေကို
ပင်လယ်ထဲက ဖောင်ပေါ်မှာ ရတနာထုပ်ကြီးရွက်ပြီး ရေငတ်နေသလို
သဲကန္တာရထဲမှာ ဇိမ်ခံကားကြီး ဘီးမရှိသလိုဖြစ်နေတာပေါ့
ဘာကိန်းဂဏန်းတွေ ညာတွေ စောက်ပိုတွေလုပ်ပြီး ဘာစာအုပ်မှ မလှန်ထားဘူး
ဒါကို ဘယ်ကောင်က အရိုးအရင်းကိုက်ပြီး
ဟိုစီမံကိန်း ဒီစီမံကိန်း နှပဲတစ်ပြားပေးပြီး အိမ်သိမ်းယာသိမ်း ဒါဘဲ
ခင်ဗျားတို့ပထွေး စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ အရင်း၇ှင်တွေကလက္ခံမလား
သူများမြေယာတွေကိုသိမ်း သူများမျက်ရည်ကျတာကို ဥပက္ခာပြု
ကောက်ကျစ် စုပ်ပြတ် ခိုးဝှက်
ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက် ဝမ်းနည်းသွားရင် ကျုပ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်
ဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုက ကျုပ်ရဲ့စောက်သုံးမကျတဲ့ စိတ်ဓာတ်ဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်
သူများရဲ့မျက်ရည်တွေ ဝမ်းနည်းမှုတွေ ဘဝတွေ
အမေး -ပိတ်ဆို့မှုတွေ…..ခုခေတ်မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ ကိုတကယ်လက်တွေ ထိခိုက်စေပါသလား?
အဖြေ – ကြိမ်းသေပေါက် ထိခိုက်ပါတယ်။
အမေး – လူထုကိုကော?
အဖြေ – သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ထိခိုက်ပါ (သတိချပ်ရန် – အဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း နဲ့ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေကိုအသုံးပြုမှပါ) သို့မဟုတ်ရင် ထိခိုက်ရန်မရှိပါ။
အမေး – ဒါဆိုဘာလို့ လူထုကဒီနေ့ထိ စီးပွားရေးစားဝတ်နေရေး နလံမထူသေးတာလဲ?
အဖြေ – အစိုးရရဲ့ အမြှော်အမြင်မရှိ၊ စေတနာမပါတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးသက်သက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ လားလားမှ မသက်ဆိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
ယုံကြပါဗျာတို့…။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ နဲ့ ခု အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ကိုဝန်းရံနေကြတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ ရဲ့ အိမ်တွေမှာ မိသားစုချင်းစကားပြောကြရင် ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဘယ်လောက်တောင်ဒေါသ (ကြိတ်ပုန်းဒေါသ) ထွက်ကြလည်းဆိုတာ မြင်ကြရင်………..။
ကိုတရုပ်ကြီးဘဲ အနောက်နဲမြန်မာအဆင်ပြေမှာ သူလက်မခံနိင်ဘူးလေ
“ကျီးယောင်ဆောင်ဒေါင်းတွေ၊ စားဖားတွေ၊ နောက်ဆွဲတွေ ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ” တဲ့…
သူ့အာဏာ လိုချင်..သူ့ဖင်လှံနဲ့ထိုး… (ဒါမှ ထိုင်ခုံပေါ်က ထမှာ)
မင်းအုပ်ထိန်းသူတွေက… ရပ်ကွက်ထဲက လူ့ခွစာ တွေမဟုတ်လား… အရက်သမား..ဖဲသမား….
ဟေ့… မင်းတို့ကို အုပ်ထိန်းတဲ့သူ အသုံးမကျလို့ ငါတော့ မင်းကို ကျောင်းမှာ လက်မခံနိုင်ဘူး…
စီးပွားရေး တုတ်နဲ့ ထိုးလိုက်တာ… မြန်မာပြည်ရဲ့ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျသွားဆိုပဲ..
ဒါဆို အခု ဘယ်သူတွေ တက်လာသလဲ….
အစိုးရသစ်တဲ့…. ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်မယ်ပြောတယ်…
မထူးပါဘူးကွာ…. အာဏာရတာနဲ့ ပြောချင်တာပြော..လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတာပါပဲ…
တိုင်းရေး၊ ပြည်ရေး၊ နိုင်ငံ့အရေး၊ စီးပွားရေး အကြံပြု ဆွေးနွေးလောက်အောင် အတွေ့အကြုံ မပြည့်ဝဘူးလို့ထင်လို့ ၀င်ရောက်မဆွေးနွေးပေမယ့် အခုလို တိုင်းပြည်အတွက် အရေးတယူ ပြောကြ ၊ ဆိုကြ ၊ ဆွေးနွေးကြတာတွေကို ဖတ်ရတာ အင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်။ မှားတာ မှန်တာ အသာထားလို့ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုး နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်လက်လှမ်းမီတဲ့ အနေအထားကနေ ပိုင်းခြားဝေဖန်သုံးသပ် တွေးခေါ်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေရစေတဲ့ အတွက် ဒီလိုဆွေးနွေးစရာတွေပါတဲ့၊ အမြင်ချင်းဖလှယ်နိုင်နဲ့ post မျိုးကို များများဖတ်ချင်ပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ အားလုံးကိုလဲ သဘောကျပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ တက္ကသိုလ်တွေမှာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ပျောက်သွားတာကို လွမ်းမိပါတယ်။
လမ်းစဉ်ပါတီခေတ် တုံးက တပ်တွေမှာ တိုင်းတပ်တွင်းပညာပေးသင်တန်းတွေ နဲ့ အရပ်ဘက်မှာတော့ ဗနတ လို့ခေါ်တဲ့ ဗဟိုနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ် ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ တစ်ပါတီစနစ်မို့ မြန်မာလမ်းစဉ်နဲ့သွားတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ကို လူထုခေါင်းထဲရိုက်သွင်းနိုင်ဘို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ခက်တာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အခက်အခဲ ကြဉ်ထဲကြပ်ထဲရောက်လာတော့ အဲ့ဒီပါတီကိုထူထောင်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း၏အင်အားပြည်တွင်းမှာသာရှိသည် လို့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်းကိုယ်တိုင် ပြည်ပကနေခွာ ဘို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကြည့်လေ။
ဆိုလိုတာက ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေ သင်သင် ဘ၀နဲ့ယှဉ်လာရင် အဲ့ဒီ တွေးခေါ်မြှော်မြင်မှုတွေ နောက်ကောက်ကျသွားတတ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ ယခင်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်တန်းဆင်းကေဒါတွေ ပါလာတာကိုလေ့လာကြည့်ကြပါ။ သူတို့တတွေကဘဲ သူတို့လေ့လာလိုက်စားခဲ့တဲ့ စနစ်ကို လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးဝေဖန်နေကြပြီလေ…….
ဒို့ အကိုကြီး ကိုကြောင်ကြီးကွ
နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတာကြားလို. ဖတ်မလို. ဆိုဒ်ဖွင်.တော.လည်း ကွန်ကမတက်တာနဲ.
မသိဘူးဖြစ်နေတာ အခုတော. ကိုကြောင်ကြီး ကောင်းမှုကြောင်.သိသွားပြီ